Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel na elu nke ọgụgụ dijitalụ | Akụkọ akụrụngwa
Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel na elu nke ọgụgụ dijitalụ
Villamandos | | Amazon, ndị na-agụ akwụkwọ
Naanị ụnyaahụ Amazon kwadoro ihe ọhụrụ Ọdịdị Omenala, nke enwere ike idobe maka ọnụahịa dị oke ọnụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụahịa nke ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a, ọ bụ ezie na anyị atụworị anya na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị ka ndị ọzọ eReaders dị na ahịa ma ọ bụghị Obi iru ala. Ọ bụ kpomkwem na nke ikpeazụ na anyị ga-ebịne ya ihu na ihu iji chọpụta ọdịiche ha, myirịta na a otutu ihe na-akpali ozi.
Anyị na-echeta na Kindle Voyage bụ ruo ụnyaahụ Kindle ikpeazụ malitere na ahịa nke Amazon na ọ kwụpụrụ maka atụmatụ ya dị ike na atụmatụ adịchaghị nke onye ọ bụla nwere ya n'aka ya adaala. Ọnụahịa ya dịkwa elu nke ukwuu, mana ọ gbochighị ya ịghọ otu n'ime ngwa ahịa Kindle kachasị mma.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe kpatara ị ga - eji zụta otu ngwaọrụ ma ọ bụ ọzọ dabere na ndịiche ha na myirịta ha, gaa n’ihu n’ịgụ ihe, n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọtụtụ ozi ị ga-agụ ebe a ga-amasị gị, ma ị ga-aghọta, dịka ọmụmaatụ, ịrị elu nke ọnụahịa nke Kindle Oasis ma e jiri ya tụnyere Kindle Voyage.
Nke mbụ, anyị ga-enyocha isi ihe na nkọwapụta nke ma Ọdịdị;
1 Atụmatụ na nkọwa doro anya nke Oasis
2 Atụmatụ njem na-enweghị atụ
3 Design, otu akụkụ siri ike melite
4 Ihuenyo, otu ihe yiri nke a n'etiti Kindu abụọ a
5 Ihe Kindle Oasis, ụdị dị iche na nke pụrụ iche
6 Ọnụahịa ahụ. Ngwaọrụ abụọ a dị oke ọnụ
7 Mmechi, duel dị elu na onye mmeri doro anya
Atụmatụ na nkọwa doro anya nke Oasis
Display: webatara a 6-inch inch touchscreen with Paperwhite technology with E Ink Carta ™ and integrated reading light, 300 dpi, kachasị font technology, na 16 gray scales
Akụkụ: 143 x 122 x 3.4-8.5 mm
Emeputara ya na ulo plastik, ya na polymer nke edobere ya na usoro galvanization
Arọ: WiFi mbipute 131/128 grams na 1133/240 grams ihe WiFi + 3G (a gosipụtara ibu ahụ na mbụ na-enweghị mkpuchi na nke abụọ ejiri ya)
Esịtidem ebe nchekwa: 4 GB na-enye gị ohere ịchekwa karịa 2.000 eBooks, ọ bụ ezie na ọ ga-adabere na nha nke ọ bụla akwụkwọ
Njikọta: WiFi na 3G njikọ ma ọ bụ naanị WiFi
Formatsdị akwadoro: Nhazi 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI na-enweghị nchebe, PRC nwaafọ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP site na ntughari
Atụmatụ njem na-enweghị atụ
Ihuenyo: nwere ihuenyo 6-inch na leta teknụzụ e-papper, metụta, na mkpebi nke 1440 x 1080 na 300 pikselụ kwa inch
Akụkụ: 162 x 115 x 76 mm
Mere nke ojii magnesium
Arọ: WiFi ụdị 180 gram na 188 grams WiFi + 3G mbipute
Formatsdị akwadoro: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI na-enweghị nchekwa na PRC na usoro izizi ha; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP site na ntughari
Ọdịdị dị elu dị elu nke ga-enyere anyị aka ịgụ n'ụzọ dị mma ma dị mma
Design, otu akụkụ siri ike melite
Nzube nke Kindle Voyage doro anya na o siri ike ịkụtu site na ngwaọrụ ọ bụla Ma ọ bụ na dịka anyị kwurula, ozugbo mmadụ nwere n'aka onye nwere ike ịchọpụta na ihe eji eme ihe dị oke mma ma metụ aka aka dị egwu. Amazon na Kindle Oasis ọhụrụ ya chọrọ inye mgbatị na nhazi ahụ ọ bụ ezie na ọ gbalịsiri ike ịmepụta ngwa ngwa na obere kọmpat, yana yana ọhụụ nke ikpe ahụ nwere batrị e wuru n'ime ya, ọ jisie ike inye ya emetụ mmetụ ahụ na njem ahụ.
Otu akụkụ dị na ọkwa imepụta nke enwere ike ịkọwapụta maka nke a Kindle Oasis, bụ akụkụ bụ na ụlọ ọrụ Jeff Bezos duziri jikwaa rụpụta ngwaọrụ dị oke ọkụ. Ma ọ bụ naanị otu ibu nke gram 131, ọ ga-ada nke obere nke gram 188 nke Kindle Voyage nwere. Tụkwasị na nke a, anyị na-ahụkwa ngwaọrụ nwere oke ọkpụrụkpụ na-erughị nke ngwaọrụ Kindle ọ bụla enwere ike zụta ruo ugbu a n'ahịa.
Ikekwe n'ihe gbasara imewe, njem ụgbọ mmiri dị n'ihu nke a Kindle Oasis, mana obi abụọ adịghị ya na akwụkwọ akụkọ ahụ ga-agbakwunye na arụmọrụ nke ọhụụ ọhụrụ ga-enye anyị, mee ka Oasis enweghị mmetụ ahụ. nke imewe onwe ya, ma na usoro nke imewe ọzọ atụmatụ.
Ihuenyo, otu ihe yiri nke a n'etiti Kindu abụọ a
Ọ bụrụ na anyị nwere Kindle Voyage na ọhụrụ Kindle Oasis na tebụl, anyị ga-ahụ ngwa ngwa na nha akụkụ nke ngwaọrụ abụọ ahụ, anyị ga-ahụ ọhụụ ọhụụ nwere batrị etinyere nke Amazon eReader kacha ọhụrụ na-enye anyị, mana anyị enweghị ike ịhụ ọdịiche ọ bụla na ihuenyo nke akwụkwọ e-akwụkwọ. Ma ọ bụ na anyị nwere ike ịsị na na Kindle anyị ga-ahụ otu ihuenyo ahụ, agbakwunye n'ime ahụ dị iche.
Ihuenyo abụọ ahụ bụ sentimita asatọ na ntanetị nke 6 centimeters, na mkpebi nke 15.2 pikselụ kwa inch, kachasị nkà na ụzụ, na akpịrịkpa isi awọ 300 dị iche iche. Na ngwaọrụ abụọ anyị na-achọpụtakwa ohere nke ịnụ ụtọ ọkụ agbakọrọ, nke ga-aba uru n'ezie n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala. Naanị ihe dị iche anyị nwere ike ịchọta bụ na teknụzụ ejiri ma ọ bụ na mgbe anyị nọ na Kindle Voyage, teknụzụ e-akwụkwọ Carta dị, na Kindle Oasis anyị na-ahụ Paperwhite na E Ink Carta. Teknụzụ abụọ ahụ yiri nke ukwuu mana enwere obere ọdịiche n’etiti ha.
Ihe Kindle Oasis, ụdị dị iche na nke pụrụ iche
Otu akụkụ nke mere Oasis Kindle a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị mgbagha kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, bụ nnwere onwe ya. N'ihi nnukwu batrị ya na batrị mpụga anyị ga-ahụ n'okwu ahụ, anyị nwere ike nwee nnwere onwe nke ruru ọnwa abụọ were iji ya mee ihe.
Na mgbakwunye, nnabata na ngwaọrụ a nke ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa pụtara na anyị nwere ike ichefu maka ịnweghachi Kindle anyị yana oge anyị ga-eme ya, anyị nwere ike ịkwadebe ya n'ime nkeji ole na ole.
Ikpe ahụ, nke gụnyere, dị ka anyị kwurula, batrị dị na mpụga, bụ otu n'ime isi ihe mara mma nke Kindle Oasis na nke ahụ dịkwa iche na ngwaọrụ ndị ọzọ na ahịa. Okwu a, nke n'ụzọ nwere ọtụtụ ụdị n'adịghị ka ikpe ndị ọzọ nke Amazon mere, ọ bụghị naanị na-enye anyị iji kpuchido eReader anyị site na nkwụsị ma ọ bụ daa, ma ọ na-enyekwa anyị ọrụ na-atọ ụtọ, nke batrị dị na mpụga pụtara.
Ikekwe n'ahịa dị ka akwụkwọ eletrọniki, nke ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile mepụtara, ihe mkpuchi nwere ike ịbụ nke na-eme ka ọdịiche ahụ wee bụrụ akụkụ dị iche iche n'ụzọ doro anya.
Ọnụahịa ahụ. Ngwaọrụ abụọ a dị oke ọnụ
Dika ọdịnala ụwa ejikọtara ọnụ ọgụgụ ọgụgụ dijitalụ yana ngwaọrụ dị ọnụ ala nke onye ọ bụla nwere ike ịzụta. Ma Kindle Voyage, nke a na-ere ugbu a maka euro 189,99 na mbipụta ya dị ọnụ ala, yana Kindle Oasis nke arụpụtara n'ahịa ahụ na ọnụahịa nke 289,99 kwa na ụdị ya dị ọnụ ala, bụ ngwaọrụ abụọ dị oke ọnụ, maka ịghara ịsị oke ọnụ. Gụ i nwere ike ịgụ akwụkwọ dijitalụ na ngwaọrụ ọ bụla, mana enweghị mgbagha ọ bụla ọzọ eReader ga-enye anyị atụmatụ ndị abụọ a Amụma emepụtara site Amazon na-enye anyị.
Onweghi onye ma obu onye obula na-agbanwe eReaders kwa afo ma obu abuo, ma Ọ bụ ezie na anyị na-eche ihu ngwaọrụ abụọ dị oke ọnụ, itinye ego na ụdị nke ụdị a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu. Njirimara, nkọwa na arụmọrụ nke Kindle abụọ a na-enye anyị agaghị achọta na ọ bụla akwụkwọ elektrọnik ọ bụla ọzọ na ahịa ma ọ bụrụ na anyị nwaa ngwaọrụ nwere ọnụ ala dị ala wee nwaa Kindle Vogaye, dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahụ ihe dị iche ngwa ngwa ị ga - achọpụta na njem njem ahụ ma ọ bụ Kindle bụ ngwaọrụ abụọ dị oke ọnụ maka ihe niile ha nwere ike ịnye gị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụzọ niile.
Mmechi, duel dị elu na onye mmeri doro anya
N'oge a, anyị enweela ike ịnụ ụtọ Kindle Oasis maka nkeji ole na ole na ngosi nke Amazon Spain kpọrọ anyị, mana ha zuru ezu ịghọta ikike nke eReader a, nke bi na isi nke Kindle Voyage nwere tinye na ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri jisiri ike melite na ike na Kindle ọhụrụ a.
Nhazi ya, ịdị nfe ya, mkpuchi ya, nnwere onwe ya na, dị ka mgbe niile, ọ dị mma ịgụ na otu n'ime ngwaọrụ ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị. O doro anya na mgbe anyị nwalere ya n'ime omimi anyị ga-ahụ ụfọdụ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ichefu ụgwọ ya, nke bụ doro anya na esemokwu dịịrị onye ọ bụla, mana anyị ji obi anyị niile kwenye na o kwesịrị ọtụtụ ịkwụ ụgwọ ihe Kindle Oasis kwesịrị, nke bụ n'ihi na anyị na-eto eto nke a duel na elu nke digital ọgụgụ.
Kedu onye ị chere bụ onye mmeri nke duel a n'etiti Kindle Oasis na Kindle Voyage?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel na elu nke ọgụgụ dijitalụ
njem nke njem ahụ bụ teknụzụ e-akwụkwọ Carta, na Kindle Oasis anyị na-achọta Akwụkwọ na E Ink Carta. Teknụzụ abụọ ahụ yiri nke ukwuu mana enwere obere ọdịiche n’etiti ha. Nke dịkwa mma
Zaghachi nye cristian
MusicAll, free Spotify maka iPhone na gam akporo gị
Nyochaa nke iPhone SE, sentimita anọ dị ike nke Apple